I-RDP Flexible Grade Factory - China RDP Nezimo Ibanga Abakhiqizi, abahlinzeki
Umkhiqizi we-HPMC g nsuku zonke ...
Factory ukuphakelwa HPMC constru ...
I-VAE i-polymer ehlakazeka kabusha ...
Nezimo Re-dispersible Emu ...
China nomkhiqizi const ...
I-Polycarboxylate Superplasti ...
Isakhiwo nosimende lengetiwe St ...
Sishaye cellulose Fibre fo ...
Granular cellulose Fibre ...
CAS 9032-42-2 HEMC for con ...
I-Flexible Re-dispersible Emulsion Powder VE3211 yokwehla kwethayela
I-ADHES® VE3211 Iyasakazeka kabusha Emulsion Impuphu kungokwe-polymer powders eyenziwe nge-ethylene-vinyl acetate copolymer, iyi- i-powder emulsion ethambile. Lo mkhiqizo muhleukuvumelana nezimo, ukumelana nomthelela, ukuthuthukisa ngempumelelo ukunamathela phakathi udaka nokusekelwa okujwayelekile.
Njenge-polymer eguquguqukayo, i-ADHES® VE3211 re-esakazekayo emulsion pisikweletu ilungele ikakhulukazi izinto zokwakha ezingaphansi kwengcindezi eshisayo noma yomshini. Inikeza ukumelana nomthelela omuhle kakhulu futhi isiza ukunciphisa ukwakheka kwemifantu kuzinhlelo zokusebenza ezingaphansi. Iyasakazeka kabusha emulsion pisikweletu I-VE3211 inikeza ukunamathela okuhle kakhulu ngisho naseziqintini ezinzima.
I-China ikhiqiza amakhemikhali wokwakha i-RDP VE3213 ephezulu eguquguqukayo
I-ADHES® VE3213 I-Polymer Powder ehlakazeka kabusha kungokwama-polymer powders enziwe yi-ethylene-vinyl acetate copolymer. Lo mkhiqizo unokuguquguquka okuhle,ukumelana nomthelela, ithuthukise ngempumelelo ukunamathela phakathi kosimende nokusekelwa okujwayelekile.
Njenge polymer nezimo, ADHES® VE3213 redispersible polymer powder ilungele ikakhulukazi izinto zokwakha ezingaphansi kwengcindezi eshisayo noma yomshini. Inikeza okuhle kakhuluukumelana nomthelela futhi kusiza ukunciphisa ukwakheka kwemifantu kuzinhlelo zokusebenza ezincanyana. Ri-polymer powder engenakulinganiswa I-VE3213 inikeza ukunamathela okuhle kakhulu ngisho naseziqintini ezinzima.